Joachim Low oo ka hadlay wararka ku aadan in Leroy Sané uu ku biiri doono Bayern Munich – Gool FM
Joachim Low oo ka hadlay wararka ku aadan in Leroy Sané uu ku biiri doono Bayern Munich
(Germany) 24 Maajo 2019. Macalinka xulka qaranka Germany ee Joachim Low ayaa wuxuu ka hadlay wararka xanta ah ee ku aadan in xiddiga kooxda Manchester City ee Leroy Sané uu ku biiri doono Bayern Munich xagaagan.
Joachim Low ayaa aaminsan in talaabada uu Leroy Sané ugu biirayo kooxda Bayern Munich ay noqon doonto mid aad u wanaagsan, isagoo dhinaca kale iska diiday inuu ku fashilmay xirfadiisa ciyaareed haatan ee Manchester City.
Wargeyska “ Bild” ee dalka Germany ayaa daabacay ereyada Joachim Low uu kaga hadlay Leroy Sané waxaana ka mid ahaa:
“Bayern Munich marwalba waa meesha ugu wanaagsan ee dalka Germany, hadii Leroy Sané uu go’aansado inuu halkaas u dhaqaaqo, waxay noqon doontaa talaabo aad u wanaagsan, waligiisna kuma dhibanaan doono”.
Hadii ay Bayern Munich go’aansato inay la saxiixato Leroy Sané, waxay ka dhignaan doontaa inuu noqdo heshiiskii saddexaad ee ugu qaalisan kooxda, kaddib Lucas Hernandez (80 milyan euro) iyo Benjamin Pavard (35 milyan euro).
Si kastaba ha ahaatee, Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheeneyso inay ku iibiso Leroy Sané aduun dhan 100 milyan oo euros, sida ay qortay jariidadda caanka ah “The Sun” ee dalka England
“Finalka Europa League waa kulanka ugu dambeeya ee Hazard uu la ciyaari doono Chelsea” - Mourinho